ဆောင်းပါး - Blogs - Myanmar in Singapore
All Blog Posts Tagged 'ဆောင်းပါး' (366)
၆၆ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အတွက်ဆောင်းပါး ( မောင်သုည )
Added by Mg Thon Nya on February 11, 2013 at 11:21am —
“မြန်မာနိုင်ငံ” နဲ. “ ဗမာလူမျိုးပါ - ”ဘားမား” ရယ်လို.တော့ ဆိုရိုးမရှိခဲ့ပါ
ဒီခေါင်းစဉ်ကို မသွားခင်(မီ)ထုံးစံအတိုင်းပဲ “လူ” ဟုခေါ်တွင်သော “လူ” များရဲ့
ဓလေ့ စရိုက်နဲ. သူတို.ရဲ့အကြိုက်ကို အရင်(လျင်)ဆုံး လေ့လာကြည့်ကြရအောင်
ပါလား။ ဟိုတစ်ခေါက်က ရေးထားခဲ့သလိုပါပဲ - တစ်မိသားစုတွင်းမှာပင် သူ.ထက်
တစ်ယောက်တော်လို. တစ်ယောက်က မနာလို-…
Added by May Kyaw Shin on February 2, 2013 at 8:37pm —
ကလေးများ လိမ်တတ်အောင် သင်ပေးသူ
ကလေးများ လိမ်တတ်အောင် သင်ပေးသူ လွန်ခဲ့သည့် တစ်လ၊ နှစ်လ ခန့်လောက်က သြစတေးလျ တီဗွီ အစီအစဉ် တစ်ခုတွင် ကလေး ငယ်များသည် လိမ်ညာတတ်သည့် အကြောင်း သုတေသန ပြုသည့် အစီအစဉ် တစ်ခု ပြသွားသည်ကို ကြည့်လိုက်ရသည်။
ထို အစီအစဉ်တွင် အခန်းငယ် ၅ ခန်းခွဲပြီး၊ ကလေး ၅ ဦးကို တစ်ခန်းစီမှာ ထား၍ သူတို့ မသိ မမြင် နိုင်အောင် လှို့ဝှက် ကင်မရာများ တပ်ထားသည်။
ကလေးငယ် များ၏ အနောက်တွင် အရုပ်… Continue
Added by Ye latt on February 2, 2013 at 4:26pm —
မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းကို လေ့လာခရီး၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (အမှတ် ၁)
မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းကို လေ့လာခရီး၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃ (၈-ဇန် ၂၀၁၃)
Silk Air (စင်ကာပူလေကြောင်း) နဲ့ ဇနီး ဒေါ်ခင်မေ၊ သား (၂၅နှစ်) Beat Box designer… Continue
Added by Zaw Aung on January 28, 2013 at 6:30am —
No Comments လူထုမပြောင်းဘဲ တိုင်းပြည် မပြောင်းနိုင်ပါ!
thevoicemyanmar မှစာရေးသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စေတာနာတွေကို အများပြည်သူသိစေချင်မြင်စေချင်တာကြောင့် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာပါ ...
ဒေါ်စုက လူထုကိုပြောပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဘယ်တော့ ပြောင်းမလဲဆိုတာ သိဖို့ကိုယ့် ဘာသာပြန်မေးပါ။ ကိုယ်ဘယ်တော့ ပြောင်းမလဲ၊ ကိုယ့်စိတ်ဘယ်တော့ပြောင်းမလဲ၊တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်တော့အလုပ်လုပ် မလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပါတယ်လို့လူထုကိုပြောသွားပါတယ်။… Continue
Added by Ko Nge on January 27, 2013 at 1:27pm —
အာဇာနည် သူရဲကောင်း - လူစွမ်းကောင်းနဲ. မိုက်ရူးရဲ
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ------
တနင်္ဂနွေနေ. ညနေ (မြန်မာစံတော်ချိန်) ၆း၄၀ မှာ
“လူငယ်မှတ်သား - သုတစကား“ အစီအစဉ် မှ ထုတ်လွှင့်
သွားတဲ့ “အာဇာနည် သူရဲကောင်း-လူစွမ်းကောင်း နဲ. မိုက်ရူးရဲ”
ဆိုတဲ့ အသံလွှင့် အစီအစဉ်လေးပါ ။
အသံကိုဖမ်းလို.အဆင်မပြေဘူး စာသားပါ တင်ပြပေးပါ-ရယ်လို.
Added by May Kyaw Shin on January 25, 2013 at 5:23pm —
No Comments “ညည်းတို့ပိုက်ဆံတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲအေ့”
“ညည်းတို့ပိုက်ဆံတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲအေ့” တစ်ရက်မဒမ်ပေါက်ဈေးသွားမယ်ဆိုတော့ ဈေးလိုက်ပို့ပေးရပါတယ်။ အဲတော့သူဈေးဝယ်နေတုန်း ကျနော်က ဈေးအပြင်ဘက် နားကအရိပ်ရတဲ့ ဗာဒံပင်လေးအောက်ကနေစောင့်ပါတယ်။ ဘေးဘက်မှာတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကြီးကြီး။ ဆိုင်ကတော့ သိပ်ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ပေမယ့် ဈေးနားကဆိုင်ဆိုတော့စည်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆိုင်ရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်တွေ စက်ဘီးတွေရှုပ်ယှက်ခပ်လို့နေတတ်ပါတယ်။ ကျနော်ရပ်စောင့်တဲ့ နေရာလေးနားမှာ… Continue
Added by kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး on January 19, 2013 at 9:00am —
No Comments သီချင်းများကပြောသော မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်း
သီချင်းများကပြောသော မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်း ၆၅ နှစ် မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်
အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီလက်အောင်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကြာအောင်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကို လွတ်လပ်ရေးရအောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျိုးပမ်းခဲ့ကြတာကို သီချင်းများက မှတ်တမ်းဖေါ်ကျူး… Continue
Added by Mg Thon Nya on January 6, 2013 at 3:00pm —
Air Bagan လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် ကမ္ဘာလေယာဉ်ပျက်ကျမှုသမိုင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်!
AirBagan လေယာဉ်ပျက်ကျတာတွေကို စာနယ်ဇင်းတွေမှာ တယောက်တပေါက်ထင်မြင်ချက်တွေ ရေး သားနေကျတာကိုတွေ့လို့် နှင့် ဖေ့ဘွက်တွေမှာ ထက်မြင်ချက်တွေပေးနေကျတာကို တွေ့ရလို့ အင်တာနက်မှာရှာပြီး တကမ္ဘာလုံးမှာ လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့တဲ့…
Added by Ko Nge on December 27, 2012 at 4:00am —
No Comments မန်နေဂျာလား… ဟောက်ဆာဂျင်လား…
လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းတွင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုဖို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲသူတွေ ရှိရစမြဲဖြစ် ပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ လုပ်ငန်းလုပ်သူတိုင်း သိထားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲသူသည် စီမံကိန်းများ၊ စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်းအပြင် လုပ်ငန်း…
Added by manawphyulay on December 20, 2012 at 8:37pm —
No Comments ကံမရှိဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ
ကံမရှိဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ ဆိုသည့် စကား၏အဓိပ္ပါယ်ကို ကုသိုလ်ကံအကြောင်းမပါရင် မည်သို့ပင်ကြိုးစားစေကာမူ မွဲကျ ၊ရှုံးနိမ့်ကျ ၊ မအောင်မြင်ကျဘူးလို့ ယူဆနေကျပါ တယ် ။ လူတစ်ယောက်မှာ ငွေကြေး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝတိုင်း အောင်မြင်နေသောသူ တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်လို့မရနိုင်သလို ၊ငွေကြေးမချမ်းသာလို့မပြည့်စုံမကြွယ်ဝ တာတစ်ခုထဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကို မအောင်မြင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ပါ ။
မိမိကျင်လည်ရာပါတ်ဝန်းကျင်မှာ စီးပွားရေး ၊ပညာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးအစစအရာရာတို့တွင် ကတိတည်တယ် ၊ တိကျတယ် ၊… Continue
Added by htiketinmyint on December 20, 2012 at 7:29pm —
စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ အိမ်ရှေ့ ထွက်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ဘောလုံးကန်နေလိုက်တယ်
Added by Mg Thon Nya on December 14, 2012 at 1:52pm —
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ ပဓာနကျသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မှီရေးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ၀န်ထမ်းများသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အချိန် အတော်ကြာ ၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကို လုပ်ဆောင်ကြခြင်း မရှိပဲ တစ်နေရာမှ နောက်တစ်နေရာ သို့ ကူးပြောင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေလျှက်ရှိတာကို တွေ့ရှိရခြင်းကြောင့် ဘာတွေကြောင့်ြေ…
Added by manawphyulay on September 8, 2012 at 4:22pm —
သားသမီး များသောမိခင်များ အတွက် အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝစေသော နည်းလမ်းကောင်းများ
အမျိုးသမီးတိုင်းတစ်သားမွေး တစ်သွေးလှ လာတတ်ပေမယ့် နှစ်သားမွေးသုံးသားမွေးပြီးနောက်မှာတော့ .. အလှ ယိုယွင်း လာတတ်သူများပါတယ်.။ တကယ်တော့.. မိမိတုို့ ရဲ့ အနေအထိုင် အပြောအဆို များသာမက ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေပါ မသိမသာပြောင်းလဲ သွားရင်း ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ရင့်ရော်သယောင် ထင်လာရတတ်တယ်။ ထို့ အတူပဲ မိမိခင်ပွန်းသည်အပေါ်မှာပါ အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အဝ ပေးဖို့ လစ်ဟင်းလျော့ရဲ…
Added by မနတ်သမီး on September 6, 2012 at 8:43am —
သီရိခေတ္တရာပြည့်ရှင်မလေး - ဘေဒါရီ
အဘိုးပြောတဲ့ ရာဇ၀င်ပုံပြင် ( ၁ ) သီရိခေတ္တရာပြည့်ရှင်မလေး - ဘေဒါရီ
” အဘိုး ဒီသီချင်းက ဘာတွေလဲဟင် သမင်မကလေးက ခလေး မွေးလာတာလားသူ့နံမယ်က ဘေဒါရီ တဲ့လား ” ” အေး ဟုတ်တယ် အေး အေး အဲဒါ မြန်မာ့ရာဇ၀င်အစပေါ့ကွဲ့ ”” ထူးဆန်းတယ်နော် ” ” အဲဒါပုံပြင်လားတကယ်လား… Continue
Added by Mg Thon Nya on September 1, 2012 at 4:11pm —
လူ့ဘဝဆိုတာ အင်မတန်ရခဲလှပါတယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ထောင်ထားတဲ့ အပ်ဖျားလေးနဲ့ မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ အပ်ဖျားလေးဟာ ဆုံတွေ့ကောင်း ဆုံတွေ့နိုင်ပေမဲ့ လူ့ဘဝကိုရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ကံအကျိူးပေးကောင်းလို့ လူ့ဘဝကို ရလာပြီပဲ ဆိုကြပါစို့။ ဘယ်လို ဘယ်နည်းနဲ့ အသက်ရှည်ရပ်တည်မလဲ ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သူများအဖို့တော့ ရှေ့က ပြုဖူးခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု တို့ရဲ့ အကျိုးရလာဒ်ကို သိမြင်နိုင်ကြမှာပါ။ လူ့ဘဝကို ရရှိလာတဲ့သူတိုင်း မိသားစု စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကို… Continue
Added by Khunlay on August 26, 2012 at 4:30pm —
ကျွန်မ သူ့ ကိုအမြဲ သတိပေးနေကြ “ ခင်မရေ.. ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေကွဲ့ ..တော်ကြာ ကိုတင်အောင်ကြီး နောက်တစ်ယောက်တွေ့မယ်နော် ” လို့ အမြဲတွေ့တုိုင်းပြောဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူငယ်ချင်း ခင်မ က
“ အိုအေ..ကလေးပဲ၃ ယောက်ရနေပြီ ဒင်းခြေမရှုပ်ရဲပါဘူး..ခင်မလက်ချက်မိသွားမှာပေါ့ ” လို့ ပြန်ပြောတတ်တယ်။ ကျွန်မ သက်ပြင်းချရင်း “…
Added by မနတ်သမီး on August 25, 2012 at 9:30am —
ဆီမီးခွက် တခွက် ထွန်းညှိလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ဘာဖြစ်သွားလဲ… Continue
Added by Mg Thon Nya on July 26, 2012 at 1:30pm —
လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုမှာဖြစ်ဖြစ်၊ နိင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် ။အရည်အချင်းရှိပြီး ဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ပေါ်လာရင်၊အဲဒီလူကိုနေရာမပေးချင်ဘူး၊သူ့ပညာ… Continue
Added by Mg Thon Nya on July 19, 2012 at 11:29am —
No Comments ဘိတ်သိက်ပြိုင်
ပြိုင်ပွဲထုံးစံ ရှုံးမခံလည်း နိုင်ပြန်အရှုံး ဇာတ်မဆုံးဘူး
အမုန်းသံသရာ လည်ကြပြီ ...
အမှန်ကိုမြင် အမှားပြင်မှ ကင်းစင်မာန အတ္တမပါ
ပြိုင်ပွဲတို့ထုံးစံတွင် အနိုင်နှင့်အရှုံးရှိရစမြဲပင် သို့သော်ထိုပြိုင်တွက်ကား ဘယ်သူမှုမရှုံး ရှုံးသူမရှိ နှစ်ယောက်စလုးံအနိုင်ရကြသည် ဘာပြိုင်ပွဲများပါလိမ့် သိချင်ကြပေမည်
ရှေးမြန်မာ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ရှင်ပြုနားသမင်္ဂလာ - ထိမ်းမြားမင်္ဂလာအခန်းအနား… Continue
Added by Mg Thon Nya on June 14, 2012 at 12:08pm —
လူထုမပြောင်းဘဲ တိုင်းပြည် မပြောင်းနိုင်ပါ!
နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့မြန်မာကလေး အများစုက ဘာကြောင့် မြန်မာလိုမပြော မြန်မာလို မပြုမူကြလဲ (Written by - Nge Naing)
The Pacific Conflic Zone
ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုး အိမ်ထောင်ရှင်အချို့ မိသားစုအား ပြန်မဆက်သွယ်တော့သည့် ဖြစ်ရပ်များ ယခင်ထက်ပိုမိုလာ~
18++ by 99Sanay
2013May (27)April (38)March (106)February (141)January (111)2012December (160)November (74)October (55)September (66)August (38)July (95)June (300)May (475)April (289)March (169)February (195)January (104)2011December (116)November (114)October (95)September (79)August (83)July (71)June (121)May (72)April (120)March (86)February (121)January (117)2010December (92)November (140)October (231)September (227)August (243)July (106)June (122)May (42)April (46)March (115)February (106)January (96)2009December (31)November (59)October (127)September (81)August (41)July (39)June (36)May (24)April (23)March (2)February (3)January (1)2008November (8)October (3)September (2)1999November (82) Welcome toMyanmar in Singapore
2. စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်းအကြောင်း
3. "စင်ကာပူတွင် အလုပ်ရမည်ဟုဆိုက လိမ်ညာနေသော မြန်မာပြည်သားလူလိမ်"
4. သွေးကင်ဆာဝေဒနာရှင်များအတွက် အသက်ကယ်ဆေး
6. အပျော်ရွှင်စေဆုံးစကားတစ်ခွန်း....by နိုင်းနိုင်းစနေ
7. “ဒီရင်ခွင်လေးမှာ ခိုလှုံဘူးသူတိုင်း ဒီနေရာလေးရောက်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာကို ”
8. ***love poem collection<အချစ်ကဗျာ>***
9. စင်္ကာပူမှ လူလိမ်များအကြောင်း
11. စင်္ကပူရ နာမ..
12. ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းဘ၀အကြောင်း Testimony & Story
14. မြန်မာတို့လိုအပ်နေတဲ့ အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းများသွင်းကြမလား..
16. လက်စွဲစက်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်များ စင်ကာပူရောက်မြန်မာတဦးက ရေးသားထုတ်ဝေနေခြင်း
18. “သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈)
19. ရဟန်းနှင့် ဘွဲ့ဒီဂရီ
20. နိုင်ငံတကာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ ညီလာခံ